कांग्रेसमा चार वडाध्यक्ष उम्मेद्वार हेरफेर हुँदै « Loktantrapost
कांग्रेसमा चार वडाध्यक्ष उम्मेद्वार हेरफेर हुँदै
२७ जेष्ठ २०७४, शनिबार २२:४०
विर्तामोड । नेपाली काङ्ग्रेस झापाले आज मेचीनगर नगरपालिकाका सबै १५ वडाका वडा अध्यक्ष पदका उमेद्वारको अन्तिम छनौट गर्ने भएको छ ।
जिल्ला समितिद्वारा गठित संयन्त्रले मेचीनगरका ४ वटा वडामा वडाध्यक्षको नाम परिमार्जन गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
अन्य ९ वटा वडामा भने क्षेत्रीय समितिले यस अघि निर्णय गरेका नामहरुलाई नै सदर गर्ने सम्भावना छ । २ वटा वडामा भने विवादलाई वडा तहबाटै सहमतिबाट मिलाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार बढी बिवाद देखिएको वडा नं. ३ मा दिपक थापा मगरलाई वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाइने सम्भावना छ ।
त्यस्तै, वडा नंं. ५ मा योगेन्द्र थापा मगर र वडा नं. ६ मा ललित तामाङलाई वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएर चुनावी मैदानमा पठाउने सम्भावना छ ।
मेचीनगरको मुटु मानिने काँकरभिट्टा बजार क्षेत्र रहेको वडा नं. ६ मा क्षेत्रीय समितिले यस अघि हर्क फ्याकलाई वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार बनाएको थियो । तर, जिल्ला संयन्त्रले नाम परिमार्जन गरी तामाङलाई अघि सार्ने सम्भावना छ ।
वडा नं. ७ मा अब चन्दन मेचे नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना छ । यस अघि क्षेत्रीय समितिले रुपसागर अधिकारीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्याय गरे पछि विवाद भएको थियो ।
मेचीनगरका सबै १५ वडाका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारको बारेमा निर्णय गर्न आइतवार विहान जिल्ला संयन्त्रको बैठक बसेको छ ।
काङ्ग्रेसले क्षेत्रीय समितिमार्फत यस अघि निर्णय गरेका अन्य वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार भने परिवर्तन नहुने सम्भावना छ ।
जिल्ला संयन्त्रले १, २, ४, ८, ९, १०, ११, १२ र १५ नं. वडामा वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउने यस अघि क्षेत्रीय समितिको निर्णयलाई सदर गर्ने सम्भावना छ ।
(लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा केही परिमार्जनसहित)